Accueil > Gazetin'ny nosy > Ampandrana: Anjakan’ny mpanendaka ny “arrêt” eo amin’ny tranobe
Ampandrana: Anjakan’ny mpanendaka ny “arrêt” eo amin’ny tranobe
Anisan’ny faritra be mpanendaka sy mpanao sinto-mahery ny faritra eny amin’iny Ampandrana iny, na eny amin’ny fokontany Ampandrana Atsinanana na ny fokontany Ampandrana Andrefana. Tato anatin’ny volana vitsy izay dia lasa anjakan’ny mpanendaka ny fiantsonan’ny taxibe na ny “arrêt” antsoina hoe “tranobe”, manakaiky ny ambasady Libianina. Saika isan’andro no misy olona voaendaka eo amin’ny fiantsonana io izay efa malaza ratsy ankehitriny. Manoloana izany indrindra dia nandray ny andraikiny ny pôlisy avy ao amin’ny kaomisaria Boriboritany fahatelo. Nanao be midina tampoka izy ireo ka tratra ambody omby tamin’izany ny lehilahy iray mpanendaka eo amin’io fiantsonana io, tamin’ny fiandohan’ny herinandro teo. Tsara anefa no manamarika fa tsy ela akory izay dia mpanendaka miisa roa ihany koa tratra ambody omby teo amin’ity toerana ity ihany. Marihana fa tsy ireo olona miandry taxibe na ny mpandalo ihany no lasibatra amin’izany asa fanendahana izany fa hatramin’ireo mpitondra fiara rehefa misy ny fitohanan’ny fiara rehefa hariva iny ny andro na rehefa avy ihany koa ny orana.
Fitondrana Hvm: Nibaribary ny fampielezan-keviny teny amin’ny faritra iva
“Atrehi-mahavita sy iamboho-mahefa”. Izany no nanandratana an-dRamanantsoa Benjamina ho ao anatin’ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tafakatra ambony dia ambony ao anatin’ny fitondrana Rajaonarimampianina tokoa amin’izao fotoana ny minisitra Ramanantsoa Benjamina Ramarcel. Izy mantsy no olona faharoa ao anatin’ny governemanta, raha ny arofenitra no jerena, satria aorian’ny Praiminisitra dia izy. Fantatra ny mpanara-maso pôlitika maro ny antony nakan-dRajaonarimampianina azy, dia hoe “noho izy olona itokisan’ny mponina eny amin’ny faritra iva eto Antananarivo”. Tsy misy valaka amin’ny toerana nasian-dRatsiraka ny rahalahiny, Ramanantsoa Herivelona, tamin’ny fotoanandro (1997-2001). I Benjamina Ramanantsoa moa, rehefa avy napetraka ho laharana faharoa tao amin’ny lisitra “Arema” (misokatra) tamin’ny 1989, nandritra ny fifidianana solombavambahoaka, napetraka taorian’I.lahy Rakotovao Razakaboana, dia lasa solombavambahoakan’i Madagasikara, niaraka lany tamin’io lohalisitra isan’ny nahazaka an’Antananarivo tamin’ny fotoanandrony io (Rakotovao Razakaboana). Fa rehefa naverin’ny “mpanam-bola” teo amin’ny fitondrana ny Amiraly Ratsiraka tamin’ny 1997, dia niady fo mafy ho mpanohana mahafatra-po an-dRatsiraka i Benjamina Ramanantsoa Ramarcel, ka lasa filohan’ny filankevi-paritany mizaka tena teto Antananarivo. Fotoana fohy ihany anefa no nisahanany an’izany andraikitra izany dia iny nipoaka iny ny raharaha 2001-2002, dia nanjavona tsy hita popoka ry zalahy.
Rehefa nihoitra indray ny vahoaka tamin’ny 2009 dia “nandalo ny afo fandiovana” teny amin’ny Kianjan’ny 13 may ny maro tamin-dry zalahy niara-dia tamin-dRatsiraka ka lasa mpikambana tao anatin’ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita notarihin-dRajoelina i Benjamina Ramanantsoa Ramarcel, ary hatramin’ny fotoana naha-praiminisitra an’i Camille Vital dia tafiditra ho mpikambana tao amin’ny Governemanta izy ka mandrak’ity isika miteny ity, dia io izy fa tsy afaka tao anatin’ny governemanta mihitsy, ary izao lasa olona faharoa ao anatin’ny governemanta Mahafaly Olivier Solonandrasana izao. Na ny kitapo nifonosany ara-pôlitika, dia ny “Mts” tarihin’i Roland Ratsiraka aza toa nomeny lamosina fa nanatevin-daharana an-dry zalahy manao karavato manga na “Hvm” izy.
Ireo tanora mpilalao baolina lavalava no isan’ny nianteheran-dry Benjamina Ramanantsoa teo amin’ny fanehoana ho mahazaka olona eo amin’ny sehatra pôlitika, saingy toa efa niova ny tantana, satria tamin’ireny fitokanana ny toby fiantsonan’ny fiara mpitatitra (gare routière) eny Andohatapenaka, herinandro maromaro lasa izay ireny, dia nanantena ny mpilalao baolina lavalava hitaona ny mponina amin’ny faritra iva hanotrona azy teny ry Ramanantsoa Benjamina, saingy nihanjahanja teny. Inona loatra ny antony? Tsy nisy vola nentina nampiasana an-dry zalahy ho toy ny nahazatra fahiny dia ny hoe “mpikarama an’ady” ve?
Taorian’iny rivo-doza Ava teo iny indray dia nihazakazaka nanonitra ny tsy tratra teny Andohatapenaka ry Ramanantsoa Benjamina sy ry Rahajason Harry Laurent (Rolly Mercia) ary ry Rasolofonirina Xavier Béni, ka tonga teny Andranomahery Ankorondrano, izay toerana isan’ny voalohany tra-boina teto Antananarivo tamin’iny andro ratsy teo iny. Dia nanao angoan-tenda nampanantena kintana amam-bolana indray i Benjamina Ramanantsoa hoe “misy tetik’asan’ny filohampirenena hikarakarana anareo ety amin’ny faritra iva ka hanomboka amin’ny faran’ity volana janoary ity izany”. Dia nisarika ny fon’ireo mponina sahirana amin’ny faritra iva izy satria efa manakaiky ny fotoam-pifidianana; ary dia milaza izao fampanantenana isan-karazany izao.
Raha misy tokoa aloha izany tetik’asa izany, moa tsy laharam-pahamehana tamin’ny fitondrana ny fanatanterahana izany nanomboka tamin’ny 2014? Nahoana no aty amin’ny fifaranan’ny fotoam-piasan’ny filohampirenena vao ampilendalendaina izany ny mponina? Amin’izay, tsy fantatra ny vontoatin’ilay tetik’asa na fanamboarana trano fonenana na fanesorana ny mponina eny hifindra toeram-ponenana amin’ny faritra avoavo kokoa na fametrahana fotodrafitrasa hisorohana ny tondra-drano tsy hitranga intsony amin’ny manaraka, na inona na inona. Dia fampanantenana fotsiny satria fampielezan-kevitra no atao e!